Xil Fiqi: “Qoraalka yaabka leh ee NISA waxaa iiga soo baxday 4 qodob” – Hornafrik Media Network
Xil Fiqi: “Qoraalka yaabka leh ee NISA waxaa iiga soo baxday 4 qodob”
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa si weyn u dhaliilay qoraal ay baahisay hey’adda Nabad sugidda ee NISA, taas oo lagu sheegay in dal shisheeye uu ka danbeeyey qaraxii 28-kii bishan ka dhacay Isgoyska Ex kontorol Afgooye ee magaalada Muqdisho.
Xildhibaan Fiqi ayaa war bixinta NISA ku tilmaamay mid yaab leh isla markaasna ay uga soo baxday illaa Afar qodob.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi:
Warqadda hey’adda NISA ee la yaabku ka muuqdo waxaa iiga soo baxey:
1. In ay siyaasadaysan tahey, loolankii dawladaha qaarkood ka dhexeeyayna dhiigga masaakiinta Soomaalida la rabo in ay isaga aarsadaan, ayadoo soo dhexmaraya hey’adda nabadsugidda.
2. Shabaab In loo cudurdaarayo, lagana leexinayo eedda xasuuqii dhacay.
3. In ciidamada Amniga iyo shacabka Soomaaliyeed cadowgii aragagixada ahaa ee ay ka aargoosan lahaayeen laga weecinayo mid aan ahayna loo tilmaamayo.
4. In dawladdu ay iska leexiso In alshabaab ka awood batey, sidaas awgeedna meel kale iyo dawlado shisheeye dusha laga saaro.
Waxaa isweydiin mudan haddii NISA sidaan degdegta ah ay wax ku ogaan karto maxey uga hortagi waayeen inta aan dadka la xasuuqin?!
Hey’adda NISA waxey sheegtay In ay hey’adaha sirdoonka caalamka qaarkood ay baaritaanka la kaashan doonto, waxaa looga baahan yahay in banaanka ay soo dhigaan hey’adahaas ay sheegeen?! Si loo ogaado In baaritaankaasi siyaasadaysan yahay iyo In kale.
Kooxaha argagixisada ama cid kasta oo ku soo hoos-gabata ayaga iyo kuwa marin habaabinta umadda ku samaynaya nooma kala duwana, waxaan dalbanaynaa In baaritaan madax banaan lagu sameeyo dhacdadii xasuuqa Ex-Kontorool Afgooye iyo habdhaqankan cusub ee madaxda NISA ay la soo baxeen oo muujinaya In NISA lafteedu ay ajnabi gacanta u gashay iyo In kale!? Lana Shaaciyo cidda baaritaankaas ka qeybgalaya.
Faah-faahino ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay Wisil
Koox lala xariirinayo Al-Shabaab oo weerar jid gal ah ka geystay G/Waqooyi Bari